Ezinye izinhlelo zokusebenza ziqala ukunikeza amawijethi we-XL we-iPadOS 15 | Izindaba ze-IPhone
U-Angel Gonzalez | 24/09/2021 20:00 | Izinhlelo zokusebenza ze-IPhone, iOS 15
I-iPadOS 15 inyuse i- ukukhiqiza yohlelo olusebenzayo maqondana ne-iPadOS 14. Ukuhlanganiswa kwelabhulali yohlelo lokusebenza noma ukwenza imisebenzi eminingi kabusha kwenziwe ukusebenza kwe-iPad kusebenze kakhulu futhi ngasikhathi sinye kusheshe futhi kube wusizo kumsebenzisi. Enye into eseyintsha efikile yile Amawijethi we-XL, inkulu evumela ukubonisa imininingwane eminingi yazo zonke izinhlobo nokuthi onjiniyela bangazakhela izinhlelo zabo zokusebenza. Empeleni, izinhlelo zokusebenza eziningi zivuselela futhi zikhipha amawijethi wazo ngefomethi ye-XL njengezinto 3, Isimo Sezulu Esihle noma Esiyi-CARROT.
Okuqukethwe okuningi kumawijethi we-XL we-iPad ane-iPadOS 15
Manje usungabeka amawijethi phakathi kwezinhlelo zokusebenza ku-iPad yakho. Zitholakala ngosayizi omkhulu ukusisebenzisa ngokugcwele isikrini.
Izinto ze-3 zingenye yezinhlelo zokusebenza zokukhiqiza ezilandiwe kakhulu ku-App Store. Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ivuselelwe kwinguqulo engu-3.15 futhi yethula izici ezintsha zamadivayisi ane-iOS 15 ne-iPadOS 15. Amawijethi ayo e-XL we-iPad ayatholakala kule nguqulo. Imayelana newijethi Ngemuva kwalokho kanti enye inikeza uhlu oluyingqayizivele ukubona okuqukethwe okuningi mayelana nohlu lwethu.
Ngokubheka nje singabona uhlu lwethu esikrinini bese silufinyelela futhi sihlanganyele nezinto ezivela kusikrini sasekhaya. Ngaphezu kwalokho, la mawijethi angaguqulwa ngokuya ngeTimu yawo noma afinyelele ngqo ekwakhiweni kwemisebenzi emisha.
Izinto 39,99 €
I-YouTube iphinde yamemezela amawijethi ayo e-XL e-iPadOS 15. Ngaphezu kwe-YouTube, bathola namawijethi amasha we-Izithombe ze-Google. Zizotholakala ezinsukwini ezizayo futhi zizoba nemisebenzi efanayo naleyo esivele ikhona namuhla kodwa ngosayizi omkhulu. Endabeni ye-YouTube, isivumela ukuthi sifinyelele umculo osanda kulalelwa, abaculi nama-albhamu. Endabeni Yezithombe ze-Google, singaba nezithombe esizifunayo ngosayizi omkhulu ukuze sinikeze ukuthinta okwenziwe ngokwezifiso ku-iPad yethu.
Izinhlelo zokusebenza ze-Flexibits nazo zithole amawijethi amasha. Endabeni yeFantastical, ungafinyelela kukhalenda enkulu kakhulu ngesigaba esikhethekile lapho yonke imicimbi emakwe ngesigaba esihambisanayo nekhalenda ivela khona. Ngaphezu kwalokho, kuvumela ukufinyelela emihlanganweni ye-telematic ngokucindezela inkinobho.
Ngekhodi yombala, i-Fantastical ikuvumela ukuthi uhlele izinsuku zesonto ngokususelwa kwimicimbi onayo nokuthi umatasa kangakanani ngalezo zinsuku. Ngalezi zinqunjwana ze-XL lokhu okuqukethwe kungafinyeleleka kalula nangokubonwayo.
Okuhle - Ikhalenda NemisebenziMahhala
Ekugcineni sinesimo sezulu seCARROT, uhlelo lokusebenza oluhlukile lokuhlola isimo sezulu. Ngokusebenzisa ihluzo nemifanekiso yazo zonke izinhlobo kuhloswe ngayo ukunikeza isimo sezulu esiphelele. Ngokuvuselelwa okusha, kungezwe amawijethi we-XL amabili angathuthukisa ukusebenza kwawo ngolwazi oluthe xaxa ngokubhaliselwe kwe-Premium ne-Ultra.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Izinhlelo zokusebenza ze-IPhone » Ezinye izinhlelo zokusebenza ziqala ukunikeza amawijethi we-XL we-iPadOS 15